Yakavanzika Policy | KarmanHealthcare.com
Karman inoremekedza zvakavanzika zvako uye yakazvipira kuchengetedza ruzivo rwatinotora pamusoro pako mukuita bhizinesi. Tinoda kuti unzwe wakachengeteka kana uchishanyira webhusaiti yedu. Naizvozvo, isu takagadzirira ichi Chakavanzika Chiziviso kukuzivisa iwe neruzivo rwatinounganidza uye mashandisiro aro. Iyi mutemo inoshanda kune www.karmanhealthcare.com muUnited States.
Ruzivo Nezve Saiti Kushanya
Paunogona kushanyira yedu Website usingazvizivise kana kuburitsa chero ruzivo rwemunhu, Karman inounganidza ruzivo rwehuwandu kuti unzwisise vashanyi 'kushandisa kwedu saiti. Mienzaniso yeruzivo urwu inosanganisira huwandu hwevashanyi, kuwanda kwekushanya uye nzvimbo dzipi dzesaiti dzinonyanya kufarirwa. Ruzivo urwu runoshandiswa mune yehuwandu fomu kuti uenderere mberi nekuvandudza kune yedu webhusaiti. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti hapana ruzivo rwunozivikanwa pachako nezvevashanyi vesaiti runoshandiswa nechinangwa ichi.
Iyi webhusaiti inogona zvakare kuunganidza rumwe ruzivo kuti unyatso ziva nevatengi vanoshanyira yedu saiti. Zvinotibatsira kunzwisisa mashandisiro anoita webhusaiti yedu, kuitira kuti tiite kuti itonyanya kubatsira kune vashandisi vedu. Ruzivo urwu runogona kusanganisira zuva, nguva uye mapeji ewebhu ekuwana kwako, iyo Internet Service Provider (ISP) uye neInternet Protocol (IP) kero yauri kuwana iyo Internet, uye kero yeInternet kubva kwawakabatana needu saiti.
Zvimwe zvikamu zvewebsite ino zvinogona kukumbira kuti utipe ruzivo nezvako kuti ugadzire account yepamhepo, zvichikugonesa kuisa odha online. Ruzivo urwu runoshandiswa sedziviriro chiyero kukuziva iwe. Mienzaniso yedata rako pachako inounganidzwa nechinangwa ichi nhamba yako yeakaundi, zita, email kero, kubhadharisa uye ruzivo rwekutumira.
Dzimwe nzira dzekuwedzera nadzo ruzivo kubva kwauri ndeidzi:
• Kunyoresa kubhadhara
• Chigadzirwa chinotsigira kunyoresa
• Kunyorera kune yedu tsamba tsamba
• Warranty kunyoresa
Karman inogona kuita kuti ruzivo rwako ruwanikwe kune vechitatu mapato vanopa masevhisi pachinzvimbo chedu. Isu tinopa mapato aya echitatu ruzivo chete rwakakosha kuti vaite masevhisi. Karman anotora matanho akati wandei kuona kuti ruzivo urwu rwaendeswa nenzira yakachengeteka.
Isu dzimwe nguva tinogona kuzivisa ruzivo kune vatinotenda navo bhizinesi kushambadzira uye zvimwe zvinangwa zvingangokubatsira.
Karman anogona kuburitsa ruzivo nezvewe waunganidzwa pawebhusaiti kana zvichidikanwa kuti uite saizvozvo nemutemo kana pazvinodiwa kuitira kuchengetedza kodzero dzaKarman kana vashandi vayo.
Karman yakazvipira kuchengetedza zvakavanzika uye kodzero dzevana. Tinotenda kuti vanofanirwa kushandisa Indaneti nenzira inobudirira uye isina njodzi nekudzivirira kwepamusoro kunowanikwa zvine chekuita neruzivo rwavo.
Naizvozvo, isu hatizokumbira nekuziva kana kutora chero ruzivo rwunozivikanwa kubva kuvana vari pasi pezera re13 vanoshandisa yedu saiti. Kana isu tikatambira chiziviso chekuti anonyoresa pane yedu saiti iri chaizvo isingasviki makore gumi nematatu ekuberekwa, isu tinobva tavhara account yavo uye tobvisa ruzivo rwavo.
Karman anotarisira kunyatso chengetedza kuchengetedzeka kwemashoko ako ega. Isu tinochengetedza yako data kubva pakurasikirwa, kushandisa zvisirizvo, kusabvumidzwa kuwana kana kuburitswa, shanduko, kana kuparadzwa. Izvi zvinogona kusanganisira kushandiswa kwekuvharira kana uchiunganidza kana kuendesa data rakaomarara senge ruzivo rwekadhi rechikwereti.
Iyi webhusaiti inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti. Karman haina mhosva yekuvanzika maitiro kana zvirimo zvemamwe mawebhusaiti.
Kugadziridza Ruzivo Rwako
Unogona, chero nguva, taura nesu at zvakavanzika@KarmanHealthcare.com uye gadziridza rako pachako uye / kana bhizinesi ruzivo.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana makomenti nezve yedu yekuvanzika ziviso kana maitiro, ndapota udza mashoko isu kuburikidza neemail. Iwe unogona zvakare kusvika kwatiri pano kune chero wiricheya yakabatana mibvunzo inopfuura mibvunzo yakavanzika.
Karman anogona kugadzirisa kana kugadzirisa ichi chiziviso chezvekuvanzika nguva nenguva chero nguva chero nguva pasina ziviso yekutanga. Unogona kutarisa "Yekupedzisira Kuvandudzwa" zuva riri pazasi kuti uone kuti chiziviso chakapedzisira kuchinjwa riini. Kuenderera mberi kwekushandisa kwako webhusaiti kunoreva kubvumidzwa kwako kune zviri mukati peichi chiziviso chezvekuvanzika, sezvo chingave chinoshandurwa nguva nenguva.